Sina Ahoana ny fomba hahazoana antoka ny fanamafisana ny fanamboarana valizy vy tsy misy fangarony ary orinasa | Shineway
Mba hahazoana antoka ny fahombiazan'ny famehezana ny valizy vy tsy misy fangarony rehefa ambany ny tsindry miasa eo anelanelan'ny baolina sy ny seza famehezana. Ao amin'ny sealing famehezana henjana, ny fahamendrehana sy ny ain'ny serivisy amin'ny volo baolina tsy misy fangarony dia miraikitra amin'ny fisafidianana marina ny haben'ny seza famehezana.
Ny fahamendrehana sy ny ain'ny serivisy amin'ny valizy baolina tsy misy vy; clamp ny mialoha-nanenjana habetsaky ny safidy marina ny famehezana seza. Ny tsy fahampian'ny fanamafisana mialoha dia tsy ahazoana miantoka ny fihenan'ny tsindry ambany amin'ny valizy: ny fanamafisana mialoha loatra dia hahatonga ny tady mifanohitra eo anelanelan'ny baolina sy ny sealing famehezana hitombo, misy fiatraikany amin'ny fiasan'ny valin'ny baolina vy tsy misy vy; ary mety hiteraka fihoaram-pefy plastika amin'ny seza famehezana, ka hiteraka tsy fahombiazan'ny famehezana. Mikasika ny seza famehezana PTFE, ny tsindry manokana mialoha dia tokony ho 0.1 PN ary tsy latsaky ny 1.02 MPa.
Ny fanitsiana ny habe mialoha ny fanamafisana ny seza famehezana henjana dia vita amin'ny fanovana ny hatevin'ny gasket fanitsiana famehezana. Ny lesoka fanodinana ny gasket fanitsiana famehezana dia hisy fiantraikany amin'ny vokatry ny fanitsiana: ny fitaovana sy ny fanitsiana mety no lakilen'ny fahazoana tombo-kase tena tsara. Amin'ny fandidiana, aorian'ny fanaovana ny seza tombo-kase, ny fahaizana manitsy ny tsindry manokana mialoha dia tena mahantra, noho izany dia fohy ihany ny androm-piainan'ny valizy fanamafisana seza mivaingana.
Ny iray amin'ireo fomba hiatrehana ny olana dia ny fisafidianana seza famehezana misy singa elastika. Amin'izao fotoana izao, ny fahazoana sy ny fanitsiana ny vola mialoha ny fanamafisana dia tsy miankina amin'ny gasket fanitsiana famehezana intsony fa vita amin'ny singa elastika. Ankoatry ny fahazoana ny vola ilaina alohan'ny fanamafisana, ny sealing famehezana misy singa elastika dia afaka manonitra ihany koa ny tsindry manokana mialoha ny fanamafisana ao anatin'ny elatry ny elastika electika amin'ilay singa elastika. Noho izany, somary lava ny androm-piainan'ny valizy.
Ny lakilen'ny famehezana valves baolina vy tsy misy fangarony dia mitoetra ao amin'ny firafitry ny seza famehezana sy ny fisafidianana ireo fitaovana sealing. Arakaraka ny rafitra sy ny fangatahana fampiharana samihafa, mifantina amin'ny fomba ara-dalàna ny fomba firafitry ny sealing famehezana mba hiantohana ny teknolojia fanodinana faran'izay tsara amin'ny sealing famehezana: safidio ny fitaovana famehezana miaraka amina asa tena tsara sy ny fangatahana fampiharana fanao mahazatra mba hahatratrarana ny takian'ny famehezana ny valva baolina ary mialoha ny fahamendrehana sy ny fampiharana ny fiasan'ny valizy bala dia fiheverana lehibe amin'ny drafitra fanatsarana ny valizy.